ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်ည (၁၄ မနက်) မှာ ကြယ်မိုးများ စွေရွာတော့မည် – XB Media Myanmar
ကြယ်မိုးဘုရင် (King of Meteor Shower) လို့ တင်စားရလောက်တဲ့ မေထုန်ရာသီ ကြယ်တာရာမှ ကြယ်မိုးများစွာ ကြွေကျတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နဲ့ ၁၆ ရက်အကြားမှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီး.. ၂၀၁၈ ခုနှစ် မှာတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်ည (၁၄ မနက်) မှာ အများဆုံး ကြွေကျတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ကြယ်ကြွေတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ကောင်းကင်မှာ မှိတ်တုပ် မှိတ်တုပ် လင်းလက်နေတဲ့ ကြယ်တွေ ကြွေသွားခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကမ္ဘာ ပတ်လမ်းကြောင်းကို ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ ကြယ်တံခွန်၊ ဥက္ကာပျံများမှ ကျကျန်နေခဲ့တဲ့ ကျောက်ခဲ (ဥက္ကာခဲ) မှုန်လေးများဟာ အဲ့ဒီ့လမ်းကြောင်းကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ ကမ္ဘာ ရဲ့ လေထုနဲ့ ပွတ်တိုက်မိခြင်းကြောင့် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အလင်းတန်းများဖြစ်ပါတယ်။ ဥက္ကာခဲတွေ များများကျန်နေခဲ့တော့.. ကြယ်တွေအများကြီးကြွေသလို အလင်းတန်းတွေ အများကြီး တွေ့ရမယ့်သဘော ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတခေါက် ကမ္ဘာ လေထုထဲ ရောက်လာမယ့် ဥက္ကာခဲမှုန်များကတော့. 3200 Phaethon လို့ အမည်ရတဲ့ ဥက္ကာပျံရဲ့ အပိုင်းအစများ ဖြစ်ပါတယ်။ (ပုံ) ဒီ ဥက္ကာပျံဟာ အရာဝထ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ တိုက်မိရာကနေ လွင့်စင်လာတာဖြစ်ပြီး.. နေကို ၁.၄ နှစ်လျှင် တစ်ပတ်နှုန်းနဲ့ လှည့်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ အနီးကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို ရောက်ရှိလာတတ်ပေမယ့် ကမ္ဘာ နဲ့ တိုက်မိနိုင်ချေ အနေအထားတော့ မရှိသေးပါဘူး။
ကြယ်တွေ ကြွေကျတာကတော့ အခုရက်ပိုင်းကတည်းက စပြီးမြင်နေရပါပြီ။ ၁၄ ရက်နေ့ မနက် ၂ နာရီလောက်မှာတော့ ၁ နာရီကို ကြယ်အလုံး ၈၀ မှ ၁၀၀ လောက်အထိ ကြွေကျတာကို သာမန်မျက်စိနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ကြယ်တွေဟာ အမှတ်တစ်ခုကနေဖြာထွက်လာသလို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး.. အဲ့ဒီ့အမှတ်ကတော့ မေထုန်ရာသီ တာရာထဲမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မေထုန်ဟာ ပြိဿ ရာသီ နဲ့ မောင်ရှင်ဆိုင်းထမ်း (ခ) လိပ်ကြယ်စု တို့အနီးမှာ ရှိလို့ ရှာဖွေရ လွယ်ကူပါတယ်။ သူတို့အနီးမှာ လင်းလက်နေတဲ့ ကြယ်ကတော့.. ညကောင်းကင်မှာ အလင်းလက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ စီးရီးယပ် (Sirius) လို့ အမည်ရတဲ့ သင်္ဘောပဲ့ ကြယ်ပြောင်ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်..။
သန့်ဦး (အာကာသနှင့် စကြဝဠာ သင်ထောက်ကူ)
ကွယျမိုးဘုရငျ (King of Meteor Shower) လို့ တငျစားရလောကျတဲ့ မထေုနျရာသီ ကွယျတာရာမှ ကွယျမိုးမြားစှာ ကွှကေတြဲ့ဖွဈစဉျဟာ နှဈစဉျ ဒီဇငျဘာလ ၇ ရကျနဲ့ ၁၆ ရကျအကွားမှာ ဖွဈပျေါလရှေိ့ပွီး.. ၂၀၁၈ ခုနှဈ မှာတော့ ဒီဇငျဘာလ ၁၃ ရကျည (၁၄ မနကျ) မှာ အမြားဆုံး ကွှကေတြော့မှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကွယျကွှတေယျဆိုတာ တကယျတော့ ကောငျးကငျမှာ မှိတျတုပျ မှိတျတုပျ လငျးလကျနတေဲ့ ကွယျတှေ ကွှသှေားခွငျးမဟုတျပါ။ ကမ်ဘာ ပတျလမျးကွောငျးကို ဖွတျသနျးသှားတဲ့ ကွယျတံခှနျ၊ ဥက်ကာပြံမြားမှ ကကြနျြနခေဲ့တဲ့ ကြောကျခဲ (ဥက်ကာခဲ) မှုနျလေးမြားဟာ အဲ့ဒီ့လမျးကွောငျးကို ပွနျလညျရောကျရှိလာတဲ့ ကမ်ဘာ ရဲ့ လထေုနဲ့ ပှတျတိုကျမိခွငျးကွောငျ့ ထှကျပျေါလာတဲ့ အလငျးတနျးမြားဖွဈပါတယျ။ ဥက်ကာခဲတှေ မြားမြားကနျြနခေဲ့တော့.. ကွယျတှအေမြားကွီးကွှသေလို အလငျးတနျးတှေ အမြားကွီး တှရေ့မယျ့သဘော ဖွဈပါတယျ။
ဒီတခေါကျ ကမ်ဘာ လထေုထဲ ရောကျလာမယျ့ ဥက်ကာခဲမှုနျမြားကတော့. 3200 Phaethon လို့ အမညျရတဲ့ ဥက်ကာပြံရဲ့ အပိုငျးအစမြား ဖွဈပါတယျ။ (ပုံ) ဒီ ဥက်ကာပြံဟာ အရာဝထ်ထုတဈခုခုနဲ့ တိုကျမိရာကနေ လှငျ့စငျလာတာဖွဈပွီး.. နကေို ၁.၄ နှဈလြှငျ တဈပတျနှုနျးနဲ့ လှညျ့ပတျနတောဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာ အနီးကိုလညျး မကွာခဏဆိုသလို ရောကျရှိလာတတျပမေယျ့ ကမ်ဘာ နဲ့ တိုကျမိနိုငျခြေ အနအေထားတော့ မရှိသေးပါဘူး။
ကွယျတှေ ကွှကေတြာကတော့ အခုရကျပိုငျးကတညျးက စပွီးမွငျနရေပါပွီ။ ၁၄ ရကျနေ့ မနကျ ၂ နာရီလောကျမှာတော့ ၁ နာရီကို ကွယျအလုံး ၈၀ မှ ၁၀ဝ လောကျအထိ ကွှကေတြာကို သာမနျမကျြစိနဲ့ မွငျတှရေ့မှာပါ။
ကွယျတှဟော အမှတျတဈခုကနဖွောထှကျလာသလို မွငျတှရေ့မှာဖွဈပွီး.. အဲ့ဒီ့အမှတျကတော့ မထေုနျရာသီ တာရာထဲမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။မထေုနျဟာ ပွိဿ ရာသီ နဲ့ မောငျရှငျဆိုငျးထမျး (ခ) လိပျကွယျစု တို့အနီးမှာ ရှိလို့ ရှာဖှရေ လှယျကူပါတယျ။ သူတို့အနီးမှာ လငျးလကျနတေဲ့ ကွယျကတော့.. ညကောငျးကငျမှာ အလငျးလကျဆုံးဖွဈတဲ့ စီးရီးယပျ (Sirius) လို့ အမညျရတဲ့ သင်ျဘောပဲ့ ကွယျပွောငျပဲ ဖွဈပါတော့တယျ..။